Janneane Blevins Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Janneane Blevins
Janneane chirongwa cheProjekti & Yenharaunda ine timu inoshamisa pa KA + A, kwavanogadzira zvigadzirwa uye zviitiko zvemakambani epamusoro-kukura tech. Iye zvakare mubatanidzwa-muvambi we IndySpectator, e-tsamba yemagwaro nhungamiro yenzira nyowani dzekuda Indy, uye hanzvadzi yayo blog, Kutanga Muoni, yakatsaurirwa kunzvimbo yemuno yekutanga. Munguva pfupi yapfuura Janneane anga achishanda kuti akure munharaunda yemafashoni eIndy kuburikidza muenzaniso, yemahara yemwedzi yekusangana yevanhu vanofarira fashoni.
Wednesday, April 25, 2012 China, April 26, 2012 Janneane Blevins
Issuu inowanzo kuve yakabatana neinobudirira pamhepo pekugara magazini indasitiri, inowedzera mafashoni magazini, nemamwe mapoka eniche anofarira. Asi Issuu, neyakareruka-kugadzira PDF mafiripi mabhuku, inogona kuve yakakosha kushambadzira & bhizinesi rekuvandudza turu zvakare. KuKA + A, apo isu tichiramba tichiwedzera vatengi vedu, baseuuuu rava rukova rwekugovana basa redu nevanhu munyika yese. Yakatanga nebhuku reposifodhi ratakange tagadzira tikadhinda mumabatch madiki tichishandisa Blurb